Sebezithole bonke izikhala abafaka izicelo zokufunda ngolwe-internet | News24
Sebezithole bonke izikhala abafaka izicelo zokufunda ngolwe-internet
Johannesburg - UNgqongqoshe wezeMfundo eGauteng uPanyaza Lesufi umemezele ngoLwesibili ukuthi bonke abafundi ababhalisa ngohlelo lwe-internet abebesohlwini lwabalinde izikhala ezikoleni zesifundazwe sebezitholile.
"Ngonyaka ophelile kwakunabafundi abangu-58 000 ababesohlwini lwabalinde izikhala zokungena ezikoleni kanti bonke sebezitholile," kusho uLesufi esiShayamthetho saseGauteng.
Kwababhalisa ngo-2016, ingane yokugcina eyathola isikhala esikoleni yasithola ngoMeyi.
OLUNYE UDABA: Sesiku-377 isibalo sabafundi abangakazitholi izikole eGauteng
"Bezingu-19 000 izicelo ezintsha kanti bonke abazifaka sebezitholile izikhala ezikoleni. Akekho noyedwa umfundi ohlezi ekhaya ngoba engasitholanga isikhala sokufunda esikoleni.
"Lokhu kuchaza ukuthi abanye abafundi abanazo izihlalo. Silinde kuqale unyaka wezezimali."
ULesufi uthe izikole zithwele kanzima njengoba kunyuke isibalo sabafundi emakilasini kanti ezinye zishoda ngezihlalo namatafula.
Ngesikhathi kuqhubeka inkulumo yesifundazwe i-State of the Province Address, uNdunankulu waseGauteng uDavid Makhura enkulumeni yakhe uthe uNgqongqoshe uLesufi kufanele akhiphe umbiko wezicelo zokubhalisa ngohlelo lwe-internet.